Iindidi ezili-10 zeMikhankaso ye-imeyile ebangelwe ekufuneka uyiphumezile | Martech Zone
Iindidi ezili-10 zemikhankaso ye-imeyile ekufuneka uyenzile
NgoLwesithathu, Meyi 24, 2017 NgoLwesithathu, Meyi 24, 2017 Douglas Karr
Ngokusebenza nabathengisi be-imeyile abaliqela, bendihlala ndimangalisiwe kukusilela koyiliweyo, olusebenzayo kubangelwe imikhankaso ye-imeyile ngaphakathi kweeakhawunti ekuphunyezweni. Ukuba uliqonga lokufunda oku-kuya kufuneka ukuba ube namaphulo alungele ukuya kwinkqubo yakho. Ukuba ungumthengisi we-imeyile, kuya kufuneka ukuba usebenzele ukubandakanya iintlobo ezininzi zee-imeyile ezinokubangela ukuba wandise ukubandakanyeka, ukufunyanwa, ukugcinwa kunye namathuba e-upsell.
Abathengisi abangasebenzisi mikhankaso ye-imeyile okwangoku balahlekile kakhulu. Idatha entsha evela kuYe Lifecycle yokuthengisa ingxelo yebhentshi yamva nje ityhila ukuba ngelixa izinto ezibangela ukukhula zikhula, uninzi lwabathengisi alusebenzisi eli qhinga lilula. Izinto ezibangela ukuba zenziwe nje phantsi kwe-7% yamaphulo onke Abathengisi bathumele kodwa bavelisa phantse amaxesha ama-5 kwinqanaba lokucofa, phantse kabini izinga elivulekileyo kwaye phantse iphindwe kathathu inqanaba le-CTO.
Khuphela iNgxelo yeNtengiso ye-Lifecycle
Zithini ii-imeyile ezikhutshiweyo?
I-imeyile ebangelwe zii-imeyile eziqaliswe kukuziphatha komrhumi, iprofayile, okanye ukhetho. Oku kwahlukile kwimikhankaso yemiyalezo emininzi, eyenziwayo ngomhla omiselwe kwangaphambili okanye ixesha ngophawu.
Kungenxa yokuba imikhankaso ye-imeyile ebangelwe kukuziphatha ekujolise kuko kunye nexesha xa umntu obhalisileyo ebalindele, bafumana iziphumo eziphezulu xa kuthelekiswa neshishini njengesiqhelo (BAU) iphulo le-imeyile njengeeleta zeendaba. Akukho jelo lingcono elamkelwe ngokubanzi.
Ixabiso le-odolo yomndilili (i-AOV) yee-imeyile ezingathengisiyo ibiyi- $ 56.34 xa kuthelekiswa ne- $ 61.54 ye- $
Xa ujonge ngokukodwa kwimikhankaso eyenziweyo, ii-imeyile zangoMgqibelo ezithunyelwe kwi-Q1 zifumene i-8% yenqanaba lokuguqula, phantse kabini umndilili wangoMgqibelo
Ngelixa i-65% yabathengisi yamkele imikhankaso yokwamkela kwi-Q1 2016, elo nani lakhula laya kwi-7% kunyaka ophelileyo
Iindidi ezibanzi zemikhankaso ye-imeyile ebangelwe ziwela phantsi komjikelo wobomi, intengiselwano, ukumaketha kwakhona, indlela yokuphila yabathengi, kunye nezinto ezibangela ixesha lokwenyani. Ngokukodwa, amaphulo e-imeyile achukumisayo abandakanya:
Wamkelekile imeyile Eli lixesha lokuseta ubudlelwane, kwaye unike isikhokelo malunga nokuziphatha onqwenela ukumisela.
Iimeyile zokukhwela- Ngamanye amaxesha ababhalisi bakho bafuna i- push ukubanceda ukuseta iakhawunti yabo okanye baqale ukusebenzisa iqonga lakho okanye ivenkile.
Ukuqalisa kwangoko -Ababhalisi abasebenza kodwa abangakhange babandakanyeke kwangoko banokuhendwa ukuba benze njalo ngezi imeyile.
Ukusebenza kwakhona kwe-imeyile -Uphinde ubandakanye ababhalisile abangaphendulanga okanye abacofe umjikelo wakho wokuthenga.
Ukumaketha kwakhona i-imeyile -Imikhankaso yenqwelo yokuthenga elahliweyo iyaqhubeka nokuqhuba olona tshintsho kubathengisi be-imeyile, ngakumbi kwindawo ye-e-yorhwebo.
I-imeyile yokuSebenza -Imiyalezo yeenkonzo ngamathuba amahle okufundisa ngethemba lakho kunye nabathengi kunye nokubanika amanye amathuba okuzibandakanya. Okubandakanyiweyo yi-e-irisithi, ukuqinisekiswa kokuthenga, ii-odolo zangasemva, ukuqinisekiswa kweodolo, ukuqinisekiswa kokuhambisa kunye nokubuyisa okanye ukubuyisela imali kwi-imeyile.
I-akhawunti ye-akhawunti -Izaziso kubathengi zotshintsho kwiakhawunti yabo, njengokuhlaziywa kwephasiwedi, utshintsho kwiimeyile, utshintsho lweprofayile, njl.
Umnyhadala we-imeyile -Umhla wokuzalwa, isikhumbuzo kunye nezinye izinto ezibalulekileyo onokubonelela ngazo okanye ubandakanyeke.
I-imeyile ebalulekileyo -Imiyalezo yokuvuyisana nababhalisi abaye bafikelela kwinqanaba elithile ngophawu lwakho.
Izinto ezibangela ixesha lokwenyani - Imozulu, indawo, kunye nemicimbi esekwe kumsitho Ukuzibandakanya nzulu kunye nethemba lakho okanye abathengi.
Isifundo siqinisekisa ukuba abathengisi baya kuxhamla ekuphumezeni ngokubanzi kunye namaphulo ahlanganisiweyo ezitsala indibaniselwano yezinto ezibangela ukubandakanyeka ngcono kunye nokuguqula abathengi. Abathengisi banokuzifumana bephinda bavavanya iindlela zabo zokukhankasela ngexesha lokuthenga ukuya esikolweni nangaphambi kwexesha lokuthenga ngeholide.
tags: Ixabiso le-odolo eliqhelekileyoi-imeyile yoku-odaukuqinisekiswa kwe-imeyileemail Marketingiziganekoukuphinda usebenzeUkusebenza kwakhona kwe-imeyileukumakethaukuthengisa kwakhona i-imeyilebuyisela imeyile ebuyiswayoukuthunyelwa kwe-imeyile yokuqinisekisaintengiselwanoi-imeyile yentengiselwanokubangelaqalisa imicimbii-imeyile ebangelakubangelwe umkhankaso we-imeyileiintlobo ze-imeyile ezibangeleWamkelekileimeyile eyamkelekileyoeweewe intengiso yemijikelezo yobomi
Izinto ezi-4 zeNtengiso ezinokuthi zifunde kwiDatha yoSuku loMama ukuphucula iiPhulo zoSuku lukaTata
IiArchetypes ezili-12 zeBrand: NguWuphi onguwe?